यसरी बनाउने पाल्पाली चुकाउनी -
राष्ट्रिय समाचार समाज स्थानीय समाचार
२०७६ बैशाख ८, आईतवार ११:५४ गते अप्रील 21, 2019 पाल्पा खबरप्रतिक्रिया दिनुहाेस on यसरी बनाउने पाल्पाली चुकाउनी
पाल्पाको ढाका जस्तै सर्वपि्रय परिकार हो, चुकाउनी ।
हुन त हामीकहाँ यस्ता थुप्रै खानेकुरा छन्, जसले अपेक्षित व्यापकता पाउन सकेको छैन । तपाईं सुदूर पूर्वको कुनै गाउँमा पुग्नुहोस् वा पश्चिमको दूर-दराजमा । केही न केही रैथाने परिकारको स्वाद फेर्न सक्नुहुनेछ । त्यहीका उत्पादनबाट, त्यहीका चुल्होमा पाक्ने खान्कीको स्वाद तपाईंले अन्यत्र फेला पार्न सक्नुहुन्छ । यस्ता थुप्रै रैथाने परिकार छन्, जसले हाम्रो जिब्रो लोभ्याउँछ । एक पटक चाखेपछि मन अघाउँदैन ।
चुकाउनी खासमा अचार हो । भात, चिउरा, रोटी आदिसँग खान सकिन्छ । चुकाउनी मात्र खाए पनि हुन्छ ।
आलु र दहीको मिश्रणबाट बन्ने यो अचार स्वादिलो मात्र होइन, स्वस्थ्यकर पनि हुन्छ । स्वादिलो र स्वस्थ्यकर भएकाले नै चुकाउनी पाल्पा, तानसेनमा सीमित रहेन । शहरका भोजनालयले आफ्नो मेनुमा यसलाई समेट्यो । नेपाल बाहिर अर्थात विदेशी भान्सामा समेत अहिले चुकाउनी परिकार पाउन थालिएको पारखीहरु बताउँछन् ।
चुकाउनी बनाउन धेरै समय लाग्दैन, न त श्रम नै । हाम्रो भान्सामा दैनिक उपलब्ध हुने सामाग्रीबाट सहजै चुकाउनी बनाउन सकिन्छ । एक पटक देखेपछि जो कोहीले आफ्नै हातले चुकाउनी बनाउन सक्छन् ।
चुकाउनी बनाउन के-कस्ता सामाग्री जुटाउने त ?
१. आलु (उसिनेको)
७. तोरीको तेल
त्यसैगरी नुन, मेथी, बेसार आदि चाहिन्छ ।
आलुलाई धेरै नगल्ने ढंगले उसिन्नुपर्छ । त्यसलाई स-सना टुक्रामा काट्ने । यसरी टुक्रा बनाएको आलुमा नुन राख्ने । काटेर टुक्रा बनाएको प्याज मिसाउने ।
अब यसमा छोप लगाउनुपर्छ । छोपको लागि सिलाम वा तील पिँधेर उक्त आलुमा मिसाउनुपर्छ ।
तोरीको तेल तताउने । त्यसमा केही मेथी फुराउने र आलुको माथिबाट राख्ने । त्यसैगरी रातो खुर्सानी र बेसार झानेर आलुमा खन्याउने ।
अब आलुमा ति सबै कुरालाई मजाले घोलेर दही मिसाइदिने । त्यसमाथि ताजा कागतिको रस चुहाउने । धनियाँको पातलाई माथिबाट छर्किने ।
चुकौनी यसरी तयार हुन्छ । यसलाई तपाईं आफ्नो मर्जी अनुसार भात, रोटी आदिसँग खान सक्नुहुनेछ ।
सिर्जना वाचन तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न
हिजो एकतर्फी संचालनमा आएको पाल्पा बुटवल सडक खण्ड फेरी अवरुद्ध
२०७७ श्रावण ५, सोमबार ०९:५९ गते जुलाई 20, 2020 पाल्पा खबर
सार्थक जिवनको लागि मनयोग सम्बन्धी तालिम
२०७५ पुष २८, शनिबार १०:२९ गते जनवरी 12, 2019 पाल्पा खबर
जल्पामा बाल भेला सम्पन्न
२०७५ पुष २६, बिहीबार ०९:०० गते जनवरी 10, 2019 पाल्पा खबर